ရန်သတိပေး P3D အသုံးပြုသူများသည်
ရန်သတိပေး P3D အသုံးပြုသူများသည်2နှစ်ပေါင်း3months ago #1067
ယခုအချိန်တွင် Dovetail သည် Flight Sim World (FSW) ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းအကြောင်းကြားဖူးကြောင်းသေချာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအစီအစဉ်ပျက်ကွက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ FSW ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်ကုန်ပစ္စည်းကိုသူတို့မကုန်မီလွန်ခဲ့သော ၂ လအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်များမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ Dovetail နှင့် FSW များသည်တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ရောင်းရန်ကြိုးစားနေသည်။ တကယ်တော့သူတို့ဟာထုတ်ကုန်ကိုတီထွင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုမကြေငြာခင် ၂ ရက်အကြာမှာသူတို့လေယာဉ် Simulator ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းပြောနေတာပါ။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုစိုးရိမ် Dovetail ပြီးသားသူတို့ plug ကိုဆွဲသွားခဲ့ကြသည်သောဤအချက်မှာနိဂုံးချုပ်ဖို့လာကြပြီရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကချိတ်ကိုကိုက်ဖို့လုံလောက်တဲ့မိုက်မဲသောမည်သူမဆိုထံမှဒါမှလုပ်နေတာမရောက်မီပိုပြီးပိုက်ဆံရဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ ဤသည်ကို Microsoft ကနေဖျော်ဖြေရေးအခွင့်အရေး၎င်းတို့၏ဝယ်ယူရာမှကုန်ကျစရိတ်များတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ တကယ်တော့သူတို့နေဆဲမေလသည်အထိရေနွေးငွေ့အပေါ်ရောင်းရန် FSW အဆိုပါ 24th ရှိသည်။ အဘယျသို့သောသင်ပြောပြသနည်း?
ကြှနျတေျာ့ကိုကွောကျရှံ့သူတို့က FSW များပျက်ကွက်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟုဆိုကာအားဖြင့်သူတို့အားဆုံးရှုံးမှုပိုမိုထေနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏လိုင်စင်ပြဋ္ဌာန်းမ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီအပြီးသွားကြဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပညာရေးလိုင်စင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်များစွာသောအဆုံးအသုံးပြုသူများကိုစိတ်ထိခိုက်ဖို့ဖြစ်စေ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှအတင်းမယ်လို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ Dovetail ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတောင်းဆိုမှုများပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်စျေးနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Dovetail သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အညစ်အကြေးကြီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝါသနာကိုပျက်စီးစေပြီးဖြစ်သည်။ အခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ Lockheed အားလေယာဉ်ပေါ်ရှိအခြား ESP platform ပေါ်တွင် plug ကိုဆွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင် X Flane သည် PC Flight Simulation တွင်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဤသို့သောလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုသည်အသုံးပြုသူအတွက်အလွန်ဆိုးဝါးလိမ့်မည်။ ကျန်းမာသောပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့်တတိယပါတီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနည်းဆုံးအဓိကလေယာဉ်ကုမ္ပဏီ ၂ ခုရှိရန်လိုအပ်သည်
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: pauand2, donran1
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် DRCW။ အကြောင်းပြချက်: တတိယပါတီ developer များဖော်ပြရန်မေ့လျော့
ရန်သတိပေး P3D အသုံးပြုသူများသည်2နှစ်ပေါင်း2months ago #1090
Ive နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်တူညီတဲ့အရာ, ထူးဆန်း၎င်း၏မျိုးကဆိုပါတယ် FSX , နောက်ဆုံးကျော်မြေပြင်ကိုတက်နေတဲ့အစီအစဉ်မှာအဘယ်အရာကိုသင်ယူ? ဆယ်နှစ်။ GameSpy ကဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာထွက်ခွာသွားမတိုင်မီကိုအနည်းငယ်နီးပါးတစ်နှစ်သိတယ်။ သငျသညျမဟုတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းခြိမ်းခြောက်သည်ဟုအများအပြားရှိသည်အဖြစ်ဤအခြေအနေသည်တော်တော်များများအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငါနေဆဲကိုယျတိုငျယခုပင်ဖြစ်၏အဆင့်ဤပလက်ဖောင်းယူပြီးလူကိုနာရီသန်းကျော် payware ရှုခင်းမှ payware လေယာဉ်တင် 28% ၏အလွန်အများဆုံး 40% မှာဖြစ်နိုင်ခြေ attributes ယုံကြည်ကြသည်နှင့်အရာကြွင်းလေသမျှအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ shareware ၌နေသောအခြားသူများအပေါငျးတို့သခဲ့ ကြောင်းအမှန်တကယ်အကြီးဆုံးဒီဂရီနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတင်ထားရမည်။ ဘဏ္ဍာရေးနယ်ပယ်ထဲမှာချိုးဖောက်မှုများ alot ရှိပါတယ်။ im ပြည်နယ်အမည်များကိုသွားပေမယ့်ကြေညာချက်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်သောဤ site ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ Hacking ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကအရမ်းချော payware ထွက်ကိုထည့်လေ့မရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရှိသည်, ဟုတ်ကဲ့အများအပြားဆက်ကြောင်းဤလှပသောဂျက်တိုက်လေယာဉ်များနှင့်တိုက်ရိုက်အဘယျသို့လက်နက်များပါဝငျအတွက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ youve ဝယ်ယူတစ်ခုခုအတွက်နှစ်စဉ်သုံးစွဲသူများအတွက် / ဝယ်ယူသူသစ်ကိုအဖိုးအခများနှင့် codes တွေကိုအားသွင်းဖို့, ပြီးတော့အချက်ကို အဖြေဖိုရမ်များသို့ပို့ရသည်။ သူတို့ကကျနော်တို့မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုကြပြီးတရားဝင်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပိုက်ဆံပါစေ။ website တစ်ခုယူပေးတယ်, FSXA FSX ရှေ FSXတစ်ဆိုဒ်ကိုလူတိုင်းနဲ့အတော်လေးအကျွမ်းတဝင်ကြောင်းအွန်လိုင်းရှိသူတို့ရှိ FSX $ 200.00 အမေရိကန်ကိုကျော်မှာရောင်းချဘို့ရွှေကို၎င်း။ တကယ့်အဖြစ်ဆိုး Hacking ကို။ သို့သော်ထို့နောက်အပေါ်သွားနှင့်အရာနားလည်ရန်ရိုးရှင်းတဲ့အမြဲတမ်းအမှုအရာပိုကောင်းလုပ်နေပါတယ်စေရန်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးလုပျလတံ့သောအရာကိုအကြောင်း shit ပေးသောဒီလိုအဖြစ်သာလွန်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောဆိုဒ်များ Irts တဦးတည်းအစဉ်အဆက်သင်ဘာအဆင့်မြှင့်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်, မေးမြန်းဖို့ဆယ်နှစ်များတွင်မြင်ကြ Ive, ယခုဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်အတွက်ထူးခြားတဲ့ Hacking ကို။ ငါငါတို့ရှေ့မှာသူတို့အပေါငျးတို့သညျမြားစှာသောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနှင့်အသက်ရှင်လျှက်ဒီကိုစောင့်ရှောက်ရန်, နှင့်နည်းစနစ်သင်ယူဖို့အစီအစဉ်များ၏ ins နှင့်တနေရာသင်ယူဖို့ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြီးရောက်လိမ့်မည်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ခြင်း simulation သမိုင်းအတွက်အခြားမည်သည့်ထက်အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ပိုပြီးတစ်ဦးချင်းစီယူဆောင်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်ထွက် drop သောသူတို့၏အများစုမှာလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကျောင်းမှထွက် drop လိမ့်မယ်။ sim doesnt လေယာဉ်များ၏အနာဂတ်သူတွေကိုပဲအမြတ်အစွန်းနှင့်ကိုယ်တိုင်သာစိတျထဲတှငျမလေယာဉ်ခရီးစဉ် sim ဖန်တီးသူ, သုံးစွဲသူများ developer များစသည်တို့ကိုနှင့်အတူမဝင်နှင့်ကိုနားထောင်တတ်ရန်သင်ယူ dont ကွောငျ့သာခိုင်မာတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှင်သန်မည်, bleek ကြည့်ရှု သူတို့ကျရှုံးမည် flightsim အများသုံးဖြစ်ပြီး, ကိုယ့်ကြောင့်သင်အာမခံနိုင်ပါ။ ငါသည်အဦးဆုံးသောက MS ပျံသန်း sim ထွက်လာသောအခါကသာလွန်ကြီးသစ်ကိုကြီး, အခုကိုယ့်နောက်ကျောရိုးအမြစ်အဖြစ်အဲဒီပရိုဂရမ်မှာ Pong ကအားလုံးကို၏ရှေ့တန်းမှ၌ရှိ၏လမ်းကိုကြည့်ရှုအောက်မေ့သတိရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ပါကအလုံအလောက်ခိုင်မာသောနှင့်မတဦးတည်းအရာခပ်သိမ်းကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သောစွယ်စုံဖြစ်စေလျက်, သင်တဦးတည်းအရာကဆင်းအိမ်တော်ကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ကြောင်း dont လျှင်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, ကောင်းသောတစ်နေရာ RIKOOOO ရှိရာကျွန်တော်နေရာတစ်နေရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် အတူတူရသေးသောပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ် SIM စေနိုင်သည်။ လုံခြုံ flight.Semper Fidelis ရှိသည်။ ကြောင်းပူးတွဲဖိုင်ကိုဖွင့်ပြသနေလျှင်, 300 နှစ်ရှိပြီပြေးပြတင်းပေါက်အကြောင်း 7G Intel နှစ်လုံးကိုအပေါ်ဂရပ်ဖစ်ကိုသိရ 7
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: DRCW, donran1